Nin lagu Fuliyay Qisaas Magaalada Balambale | maakhir.com
Balambale:- Nin horay dil u gaystay ayaa maanta Gacanta lagu soo dhigay Deegaanka Balambale isaga oo markiiba Go”aan lagu gaadhay in la qisaaso,ninkaasi ayaa horay dad ugu dilay Deegaankaasi isla markaan Baxsaday,odayaal dhaqameedka Deegaankaasi ayaa dhexda u xidhay inay Ninkaasi arinkiisa soo afmeeraan isla markaana Gacanta lagu soo dhigo.
Falkaan Qisaasta ah ee ka dhacay gudaha Magaalada Balambal ayaa waxaa lagu fuliyay gacan ku dhiigle Aastaro Maxamed jaamac oo 20-Bishaan aanu ku jirno ku dilay gudaha Magaaladaasi qoor qoor leex,waxaana xiligaasi wixii ka dambeeyay socday waan waan iyo wada hadal ay lahaayeen wax garadka labada dhinac iyadoo lagu guuleystay maanta gacan ku dhiiglaha lagu wareejiyo beesha uu dilka u geystay.
Waa markii ugu horeysay oo Gacan ku dhiigle lagu qisaaso Gudaha Magaalada Balambal kaasi oo marka hore dilka ugu geystay tooreey xili ninka uu dilay uu ku qayilaye goob lagu qaxweeyo ninkaasi oo u dhintay dhaawac ka soo gaadhay Tooridaasi.
Qisaastaasi maanta lagu fuliyay Gacan ku dhiig laha ayaa waxa aad u soo dhaweeyay Dhamaan dadka Deegaanka iyaga oo ku til maamay wax lagu Farxo, soo qabashada Ninkan ayaa waxay sahlaysay inay Nabad wada gaadhaan Beelaha ay dhibtu soo kala gaadhay.
« Wafti balaadhan oo ka socta EU-da ayaa soo gaadhay Muqdisho
Ilaa 40- NGO oo Caalami ah ayaa ka dayriyay xaalada Somaliya »